गायक मनिष विश्वकर्माको नयाँ गीत ‘आउन अँगालोमा’ सार्वजनिक
काठमाडौं । लामो समयको अन्तरालपछि गायक मनिष विश्वकर्माको नयाँ गीत आउन अँगालोमा सार्वजनिक भएको छ । गीतमा प्रतिमा आचार्यले मनिषलाई साथ दिएकी छिन् ।
सुमन केसी र गायिका विद्या तिवारीको ‘भीडमा पनि’ बोलको गीत सार्वजनिक
गायक सुमन केसी र गायिका विद्या तिवारीको आवाजमा समावेश ‘भीडमा पनि’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ । अम्बिका गुरुङको शब्दमा तयार गीतमा पुरुषोत्तम सुवेदीको संगीत छ ।
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको सातौं महाअधिवेशन पोखरामा जारी
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको सातौं केन्द्रीय महाअधिवेशन पोखरामा भइरहेको छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको महाअधिवेशनबाट लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले नयाँ नेतृत्व पाउँदै छ ।
पूर्वमिस नेपाल तथा अभिनेत्री श्रृष्टि श्रेष्ठकाे आइटम नृत्य
पूर्वमिस नेपाल तथा अभिनेत्री श्रृष्टि श्रेष्ठ पनि आइटमा देखिएकी छन् । उनले फिल्म ‘माछा माछा’ को गीत ‘म्याडम म्याडम’ मा आइटम नृत्य गरेकी हुन् ।
अभिनेत्री प्रियंका कार्की बनिन निर्देशक
अभिनेत्री प्रियंका कार्की पनि निर्देशक भएकी छन् । म्युजिक भिडियो मार्फत उनले निर्देशनमा डेब्यु गरेकी हुन् । उनको निर्देशन रहेको पहिलो म्युजिक भिडियो ‘मेरै लाहुरेले’ सार्वजनिक भएको छ ।
एकदेव लिम्बुको मार्मिक गीत‘तिम्रो मुटुमा’ सार्वजनिक
गायक एकदेव लिम्बुको नयाँ गीत ‘तिम्रो मुटुमा’ सार्वजनिक भएको छ । रोमान्टिक साथमा मार्मिक गीत गायक लिम्बुकै युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको हो । गीतमा सङ्गीत तथा शब्द गायक यश कुमारको रहेको छ ।
सपन श्रेष्ठको नयाँ गीत ‘लै बरी लैु’काे म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
गायक सपन श्रेष्ठको नयाँ गीत लै बरी लैु सार्वजनिक भएको छ । भिडियो सहित नेपाली प्र्याङ्क मिनिस्टरको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक भएको गीतमा बृजेश श्रेष्ठको शब्द, सङ्गीत र एरेन्ज रहेको छ ।
सुदुरपश्चिमको पर्यटनदुतमा नेपाल आइडल सिजन २ विजेता रवि ओड नियुक्त
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाल आइडल सिजन २ का विजेता रवि ओडलाई सुदुरपश्चिमको पर्यटनदुतमा नियुक्त गरेको छ ।
सन्तोष श्रेष्ठको नयाँ आधुनिक गीतिसंग्रह ‘उदास जवानी’ सार्वजनिक
वरिष्ठ गीतकार कालीप्रसाद रिजाल र संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठको नयाँ आधुनिक गीतिसंग्रह ‘उदास जवानी’ सार्वजनिक भएको छ ।
राजेश हमाल फिचर्ड रेणुको नयाँ गीत सार्वजनिक
रेणु विष्ट केसीको स्वरमा नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘मैले चोट खादा’ बोलको गीतमा लोकराज अधिकारीको शब्द रहेको छ ।
‘माया पिरिम’ फिल्म को ‘फोटो खिचेर’ बोलको गीत सार्वजनिक
फिल्म ‘माया पिरिम’ को ‘फोटो खिचेर’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । लेखु सहयात्री र बिन्दु परियारको स्वर रहेको गीतमा सलोन बस्नेत, अन्जली अधिकार, कोशिश क्षेत्रीको अभिनय रहेको छ ।
‘कालापानी हाम्रै हो, लिपुलेक फिर्ता गर’ बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक
भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि देशभर विभिन्न तह र तप्काका मानिसहरु सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
भिटेनले गाएकाे ‘सरौतो’को प्रमोसनल गीत सार्वजनिक
चर्चित र्यापर भिटेन (समिर घिसिङ)ले पहिलोपटक नेपाली फिल्मको लागि गीत गाएका छन् । आउँदो मंसिर १३ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘सरौतो’को प्रमोसनल गीतमा उनले आवाज दिएका हुन् ।
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को लाइभ राउन्ड सुरु, यस्ताे छ भोटिङ प्रक्रिया
सांगीतिक रियालेटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन २ को नकाउट राउन्डबाट १२ प्रतिस्पर्धाी छानिएर लाइभ शोमा पुगेका छन् ।
देवेन्द्र बब्लुको दोश्रो गीत ‘बुढाबुढी’ सार्वजनिक
देवेन्द्र बब्लुको दोश्रो गीत ‘बुढाबुढी’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा मायालु जोडीको प्रेमिल समयलाई चटपटे तरिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रमोद खरेलको नयाँ गित ‘कुनै दिन मायाँमा‘ काे भिडियो सार्वजनिक
कुमार आचार्यको निर्देशनमा नयाँ भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गायक प्रमोद खरेलको आवाज रहेको ‘कुनै दिन मायाँमा’ शब्द तथा संगीत रुपेश मास्केको रहेको छ ।
गायक स्वप्न सुमनकाे नयाँ गीत ‘बिर्सेको छैन’ बजारमा
युवापुस्तामाझ लोकप्रिय गायक स्वप्न सुमनले नयाँ गीत बजारमा ल्याएका छन् । उनले आफ्नो युट्युबमार्फत ‘बिर्सेको छैन’ बोलको गीत बजारमा ल्याएका हुन् ।
हेटौँडाकी सन्ध्या आचार्य बनिन ‘छमछमी सिजन ४’ को विजेता
नेपाल टेलिभिजनको मेगा डान्स रियालिटी शो ‘छमछमी सिजन ४’ को विजेता हेटौँडाकी सन्ध्या आचार्य बनेकी छन् ।
सनी विश्वकर्मा बने पहिलो लोकस्टार
सनी विश्वकर्माले आईएमई लोकस्टारुको उपाधि जितेका छन्। पहिलो संस्करणको उपाधिसँगै रोल्पाका साढे सत्र वर्षीय सनीले नगद ५० लाख रूपैयाँ नगद र २५
विवादित ‘तिहार गीत’ अन्ततः यूट्यूवबाट हटाए दुर्गेश थापाले
गायक दुर्गेश थापाको विवादित ‘तिहार गीत’ अन्ततः यूट्यूवबाट हटाइएको छ । थापाको गीतका विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । जिप्रकाले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टेकुलाई पत्र लेखेको थियो । सोही पत्रका आधारमा आजै महाशाखाले गोंगबुबाट थापालाई पक्राउ गरेको छ । थापा अहिले पनि महाशाखामा नै छन् । थापाको गीतले देउसीलाई विकृत तरिकाले प्रस्तुत […]
‘नेपाल लोक स्टार’को ग्रान्ड फिनाले यही कात्तिक ८ गते हुने
मौलिक रियालिटी शो (सांगीतिक प्रतियोगिता) ‘नेपाल लोक स्टार’को ग्रान्ड फिनाले यही कात्तिक ८ गते हुने भएको छ । काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्ग स्थित भृकुटीमार्गमा ग्रान्ड फिनाले हुनेछ ।
रामकृष्ण ढकालको तिहार गीत ‘टिका माला’ सार्वजनिक
गायक रामकृष्ण ढकालको आवाजमा रहेको तिहार विषेश गीत ‘टिका माला’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा शब्द रमेश विजीको रहेको छ ।
सुनील थापाले तिहारको देउसी गीत बजारमा
दशैँको रमझम सकिएसँगै तिहारको रमाइलो पनि शुरु भइसकेको छ । यसैबीच गायक सुनील थापाले तिहारको देउसी गीत बजारमा ल्याएका छन् ।
निशान र मेलिनाको नयाँ म्युजिक भिडियो ‘हावा चल्यो’ सार्वजनिक
गायक निशान भट्टराई र गायिका मेलिना राईको स्वरमा रहेको नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक ‘हावा चल्यो’ बोलको गीतमा वसन्त सापकोटाको सङ्गीत रहेको छ ।
चलचित्र ‘काले दाई’को ‘आँखा आँखा जुधी’ बोलकोगीत सार्वजनिक
असोज १७ गतेबाट देशैभर प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘काले दाई’ को रोमान्टिक गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘आँखा आँखा जुधी’ बोलको गीतमा दीपा लामा र शिव के. परियारको स्वर छ ।
बुद्ध लामाकाे नयाँ गीत ‘आफूभन्दा जेठी’ बनारमा
काठमाडौं । पहिलो नेपाल आइडल बुद्ध लामा नयाँ गीत ‘आफूभन्दा जेठी’ लिएर बनारमा आएका छन् ।
निशान भट्टराईको ‘बरिलै’ सार्वजनिक
निशान भट्टराई र नविता पौड्यालको स्वर रहेको गीत ‘बरिलै’ सार्वजनिक भएको छ । दीपक शर्माको शब्द र सङ्गीत रहेको गीतलाई उदयराज पौडेलले एरेन्ज गरेका हुन् ।
“गोर्खे ” को प्रमोसनल गीत “गाउँ भरि हल्ला ” सार्वजनिक
कोजु ईन्टरटेन्टमेनको ब्यानरमा हरि लामाको प्रस्तुति र तिर्थ राम कोजु र हरि थापाको निर्माणमा तयार भएको सिनेमा “गोर्खे ” को प्रमोसनल गीत “गाउँ भरि हल्ला ” सार्वजनिक भएको छ।
निरौलाको ‘ज्यान यो परदेशी’ सार्वजनिक
विशाल निरौलाको ‘ज्यान यो परदेशी’ बजारमा आएको छ। गीतमा गायक निरौलाकै शब्द संगीत तथा आवाज रहेको छ।
चर्चित लोकदोहोरी गायिका देवी घर्ती मगरको दशैं तिहार गीत ‘परदेशीको दशैं तिहार’ बजारमा
नेपालीहरुको महान पर्व बिजय दशमी तथा शुभ दिपावलीको पावन अवसरमा हार्दिक शुभकामना सहित चर्चित लोकदोहोरी गायिका देवी घर्ती मगर
अवार्डहरु जले पनि दर्शकले दिएको माया कहिले नजलोस् : गायक राई
गायक राजेश पायल राईको घरमा आग लागि भएको छ । शान्तिनगरस्थित उनको घरमा सोमबार साँझ आगलागि भएको हो । बिजुली सर्ट भएर उनको घरमा आगलागी भएको हो ।
कल्पना रेग्मीले मार्मिक दशैं गीत ‘झल्को सानुकै’ सार्वजनिक (भिडियो)
बडादशैंको अवसर पारेर गीतकार तथा संचारकर्मी कल्पना रेग्मीले मार्मिक दशैं गीत सार्वजनिक गरेकी छन् ।
चर्चित संगीतकार रेखा पौडलले संगीत गरेको चलचित्र कोईलाको गीत सार्वजनिक
काठमाडौँ । प्रदर्शनको क्रममा रहेको चलचित्र ”कोइला “को द्रोश्रो गीत” किन किन मन “बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । मंसिर ७ गते बाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रको गीत ” किन किन यो मन “बोलको गीतमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी पहिलो महिला संगीतकार रेखा पौडेलको संगीत रहेको छ । गायिका तथा संगीतकार रेखा पौडेलको संगीतमा तयार भएको […]
प्रमिला राईले ल्याईन् एक उत्कृष्ट म्युजिक भिडियो
गायिका प्रमिला राईको दाश्रो सोलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘जाउँ न’बोलको उक्त गीतमा संजिव सिंहको शब्द तथा संगीत रहेको छ भने दिनेश श्रेष्ठले एरेन्ज गरेका हुन् । गीतको भिडियोमा प्रमिला आफैले मोडलिङ गरेकी छिन् भने उनलाई भुवन खड्काले साथ दिएका छन् । नेपाल आईडलबाट बाहिरिएसँगै प्रमिलाले धेरै गीत गाए पनि यो उनको दोश्रो सोलो […]
राहुललाई अलि अलि गरेर अलिसाले फिदा बनाइन (भिडियो सहित)
भाइव एण्ड वेभ डान्स ग्रुपका लिडर राहुल साहद्धारा निर्देशित नँया गजल ‘अलि अलि’को म्युजिक भिडियो बजारमा आएको छ । राहुल साहसगै नायिका अलिशा शर्मासँग राहुल साहले यस गीतमा डान्स गरेका छन् । ‘फिदा..’भन्ने उर्दु शब्दलाई प्रयोग गरिएको यस गजलमा शिव परियारको स्वर तथा संगीत सुन्न सकिन्छ भने शब्द इन्द्रनारायण चोंग्वांग लिम्बु रहेको छ। हट सिक्वेन्समा […]
पुष्प र आँचलको पिरतीको रंग रिलिज (भिडियो)
गीतकार अम्बिका गुरुङको शब्द रहेको नयाँ गीत रिलिज भएको छ। सोमबार गीतकार गुरुङकै युट्युब च्यानल ‘भाव सागर इन्टरटेन्टमेन्ट’बाट ‘पिरतीको रंग’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो। शंकर थापाको संगीत रहेको उक्त गीतमा सुमन केसी र मेलिना राईको स्वर सुन्न सकिन्छ । गायक सुमन केसी र गायिका मेलिना राई गीतबाट निकै आशावादी रहेको बताउँछन्। त्यस्तै, गीतकार अम्बिका गुरुङ […]
गायक फिरोज बस्नेतको ‘आइन त्यसै परदेश’ बोलको गीत सार्बजनिक (भिडियो)
असोज २५ काठमाडौं । गायक फिरोज बस्नेतको ‘आइन त्यसै परदेश’ बोलको गीत सार्बजनिक भएको छ । गायक फिरोज कै शब्द/संगीत र आवाज रहेको उक्त गीतमा भिमफेदी गाईज,मन्जु,सपना, बुद्ध्, सुशान्त सङ्ग गायक आफै पनि अभिनय गरेका छन । चलचित्रको पार्स्व गायनमा पनि आवाज भरिसकेका गायक फिरोजका यहाँ अघी धेरै गीत दर्सकहरुले मन पराइसकेका छन । उदयपुर […]
‘छोरी नम्वर वन’ भन्दै आइन गायिका सविना श्रेष्ठ (भिडियो सहित)
काठमाडौं । गायिका सविना श्रेष्ठको ‘छोरी नम्बर वन’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गम्भिर बिष्टको कोरियोग्रफि र निर्देशनमा तयार भएको म्युजिक भिडियो बुढा सुब्वा डिजिटल मार्फत युट्युबबाट सार्वजनिक भएको छ । गीतराजु बाबु श्रेष्ठको शव्द रचना तथा हरि कर्माचार्यले कम्पोज र साहश शाक्यले एरेन्ज गरेका छन् । भिडियोमा अभिनय नायिका निश्मा घिमिरे र […]
दशैँ गीत ‘पिंग को मचाई संग’ सार्वजनिक(भिडियो)
बडा दशैँ नजिकिदै गर्दा दशैँका धेरै गीतहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् । नेपाली कला क्षेत्रले दशैँलाई बिशेष महत्वका साथ लिने गरेको छ । दशैँ शुरु भएलगत्तै विभिन्न गीतहरुले नेपालीहरुको मन घन्किने गर्छ ।यसै क्रममा गायक तथा संगीतकार बिनुप सुनुवारले नयाँ गीत रिलीज गरेका छन् । ‘पिंग को मचाई संग’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको छ । घर […]
सुनिल गिरिको नयाँ गीत परदेशी सार्वजनिक(म्युजिक भिडियो)
लोक प्रिय गायक सुनिल गिरिको यो मन एल्बममा रहेको नयाँ गीत परदेशी (कस्तो यो मन भाग २) सार्बजनिक भएको छ । गोपाल रसाइलीको संगीत सम्योजन रहेको गीतमा सब्द/संगीत/स्वर गायक सुनिल गिरिकै रहेको छ । श्रेया शर्मा र गायक स्वयमले अभिनय गरेको उक्त गीतलाई दार्जिलिङ्,सिक्किम , घान्द्रुक र जोमसोम लगायतका रमणीय ठाउमा छायान्कन गरिएको हो ।गीतलाई […]
झक्कड़को नयाँ गीत ‘भेरी सेती’
केहि समय अघि नेपाल अईडलको पहिलो सिजनमा अडिसन दिए पश्चात एकाएक भाइरल बनेका झक्कड़ थापाले आफ्नो पहिलो गीत सार्वजनिक गरेका छन्। उनले भेरी सेती बोलको लिरिकल गीत सार्वजनिक गरेका हुन्। उनको गीतमा बसन्त सापकोटाले संगीत भरेका छन् भने शब्द दिनेश थपलियाको छ। झक्कड़को नयाँ गीत संगीतकार बसन्त सापकोटाको आधिकारिक युटुब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। झक्कड़को नयाँ गीत हेर्नुहोस […]
माया सिकाउँदै अन्जु–बिन्ती
काठमाडौं । गायिका अञ्जु पन्त र अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका गायक बिन्तीकुमार गुरुङको स्वरमा रहेको ‘माया त यस्तो’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । मनोज साङसन राईद्वारा संगीतबद्ध उक्त गीतमा एमडि फिरकको शब्द छ । उक्त गीतमा गोपाल रसाइलीको संगीत संयोजन छ । यो गीत गीति एल्बम ‘बिन्ति’ मा समावेश छ ।सान थापाद्वारा निर्देशित भिडियोमा अनुराग […]
बर्षकै सर्वोत्कृष्ट फेशन डिजाईनरको अवार्ड जितिन चर्चित डिजाईनर तृष्णा गुरुङ्गले
युएईको दुबईमा सम्पन्न मोडल सङ्गस अवार्ड मा चर्चित फेशन डिजाईनर तृष्णा गुरुङ्गले बर्षकै सर्वोत्कृष्ट फेशन डिजाईनरको अवार्ड चुम्न सफल भएकी छिन । ‘नेपाली कला, संस्कृति, सष्ट्रा तथा सर्जकको सम्मानमा समर्पित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड’ भनिएको उक्त अवार्डमा तृष्णाले उक्त अवार्ड हात पारेकी हुन । दुवई, भारत तथा फिलिपिन्स लगायतका देशहरुमा समेत करीव दुई दर्जन भन्दा बढी फेशन […]
शान्ताले जितिन सर्वोत्कृष्ट मोडलको अवार्ड
मोडल सङ्गस अवार्डको आधुनिक गीत विधामा मोडल तर्फको अवार्ड नायिका शान्ता तामाङ्गले प्राप्त गरेकी छिन । मेलिना राईको स्वरमा रहेको ‘फुल फुल्छ र… बोलको गीतबाट उनले उक्त अवार्ड हात पार्न सफल भएकी छिन । युएईको दुवईमा सम्पन्न भएको उक्त अवार्ड पाए पछि खुशीले यसको श्रेय गीतमा आवद्ध सम्पूर्णलाई दिएकी छिन । गीतको सम्पूर्ण छायांकन समाजसेवी […]
नायिका तथा तथा समाजसेवी शान्ता तामाङ दक्ष इन्टर्नेसनल अवार्डबाट सम्मानित
नायिका तथा तथा समाजसेवी शान्ता तामाङ दक्ष इन्टर्नेसनल अवार्डबाट सम्मानित भएकी छिन । नायिका शान्ता तामाङ दक्ष इन्टरनेशनल अवार्डद्वारा सम्मानित हुँदै । दक्ष इन्टर्नेसनलले राजधानीको रोयल भेन्युमा आयोजना गरेको “मिस एण्ड मिसेज तीज नेपाल” कार्यक्रमको अवसर पारी प्रदान गरिएको उक्त अवार्डबाट नायिका, समाजसेवी, युवा व्यवसायी तथा “Zumba Queen,2014”, “Miss. Nepal Icon,2015” की बिजेता शान्ता तामाङ […]
एक सातामा बन्यो आदत २( भिडियो )
अमेरिकामा बसोबासरत गीतकार अम्बिका गुरुङका शब्दहरूको नयाँ आधुनिक गीत ‘आदत–२’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । युवा गायक सुमन केसीको स्वर रहेको गीतमा शंकर थापा स्माइलको संगीत छ । गीतमा उदयराज पौडेलको एरेन्जमेन्ट छ ।भावसागर ईन्टरटेन्मेन्ट एलएलसीद्वारा प्रस्तुत गरिएको भिडियोमा शान थापाको निर्देशन छ । भिडियोमा पल शाह, पुष्प खड्का, निराजन प्रधान र दीपिका […]
हरि विष्टको ‘माइतीको देश’ को २ सफलता संगै खुशियाली साट्दै ‘माइतीको आश’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
गीतकार तथा संगीतकार हरि विष्टले आफ्नो तीजको गीत ‘माइतीको आश’ सार्वजनिक गरेका छन । सोही अवसरमा दुई वर्ष अगाडि सार्वजनिक गरेको गीत ‘माइतीको देश’ को २ मिलियन भ्यूअर्स पुगेको उपलक्ष्यमा केक काटेर खुशीयाली मनाएका छन् । नेपाल सांस्कृतिक संघका अध्यक्ष तीर्थ थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा चलचित्र पत्रकार संघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं गीतकार […]
मोडल तथा नायिका नितुले लिएर आईन तिज गीत (भिडियो सहित)
चर्चित गायक गायिकाहरुको गीतहरुमा मोडलिङ्ग गर्ने मोडल तथा कलाकार नितु कोइराला पहिलोपटक आफैले गाएको गीतमा अभिनय गरेकी छिन । वर्षमा एक पटक आउने नेपाली हिन्दु महिलाहरुको महान चाड तीजलाइ लक्षित गरि नायिका नितुले आफ्नै स्वरमा रहेको ‘छ्मछमि तीजमा नाच्छु बरिलै ‘बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन । गजलकार बिमल गौतमको शव्द तथा लयमा तयार […]
गायिका प्रेक्षा बम ठकुरीको “मेरो हजुर” बोलको गीत सार्वजनिक
गायिका प्रेक्षा बम ठकुरीको “मेरो हजुर” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतको गायनसंगै शब्द तथा संगीतपनि प्रेक्षाकै रहेको छ, भने गीतमा रिकेश गुरुङको एरेञ्ज रहेको छ । गीतको भाव र शब्द अनुसार भिडियोलाई निर्देशक तथा डान्स कोरियोग्राफर माइकल चन्दले फिल्मी शैलीमा प्रस्तुत गरेका छन् । सधै डान्सिङ गीतको भिडियो निर्देशन गरिरहने निर्देशक माइकलले यस […]
हेर्नुस् सुरक्षा पन्त र सौरभ न्यौपानेकाे रोमान्स
गायक सम्राट न्यौपानेको तिम्रो रुपले बोलको गीत सार्बजनिक भएको छ । अहिलेकी ब्यस्त नायिका सुरक्षा पन्त र सौरभ न्यौपानले रोमान्स गरेको उक्त गीतमा संगीत र एरेन्ज गायक स्वयम कै रहेको छ । शब्द बिकास साप्कोटाको रहेको छ भने यस भिडियो लाई सुमन श्रेष्ठले कोरियोग्राफी गरेका हुन् । हिन्दी सिनेमाको गीत भन्दा कम नदेखिने भिडियोलाई काठमाडौंका […]
भिटेनको कथा तहल्का मच्चाउँदै (हेर्नुस् भिडियो)
युवा पुस्ता माझ चर्चित रयापार समिर घिसिङ भिटेनको पछिल्लो गीतले तहल्का मच्चाईरहेको छ । मान्छे खत्तम, चुरोट लगायत गीतमार्फत चर्चाको शिखरमा पुगेका भिटेनलाई यो गीतले थप उचाईमा पुर्याएको छ । भिडियो अपलोड भएको १२ घण्टा नबित्दै युट्युवमा २ लाख बढी भ्युज पाईसकेको छ । अचम्मको कुरा त यो गीत र भिडियोलाई कुनै नराम्रो प्रतिक्रिया आएको […]
१७ बर्ष अघि २००० मा रेकर्ड् भएको गीत ” जिन्दगीले जता लान्छ” (भिडियो)
१७ बर्ष अघि २००० मा रेकर्ड् भएको गीत ” जिन्दगीले जता लान्छ” फेस बुक मार्फत यहाँ हरु रिलिज गर्दछु। गायनको शिखर ब्यक्तित्व प्रेम धोज प्रधान को स्वर , आधुनिक संगीतक प्रतिनिधी संगीतकार राजु सिंगतथा सगीत सम्योजनका हस्ती अमुल कार्की सम्योजनको यो गीतमा जीवन दर्शन सँग सम्बन्धित मेरो शब्द रहेको छ प्रेम धोज प्रधान ज्यु सँगको […]
गायक अरुण थापा को गीत ‘चोट के हो व्यथा के हो ‘ बाल स्वोरमा अधिश्री कस्पल (भिडियो)
गायक अरुण थापा को गीत ‘चोट के हो व्यथा के हो ‘ बाल स्वोरमा अधिश्री कस्पल ल्याएको छन् ।संजीत श्रेष्ठ निर्देशित साथ साथै छायाँकन रहेको भिडियोलाई अधिश्री कस्पल आफैं प्रस्तुत छन् भने बिक्रम अधिकारिले सम्पादन गरेका छन् । ‘चोट के हो ब्याथ के हो ‘ बाल स्वोरमा अधिश्री कस्पल कस्तो छाप छोड्ला त ?भिडियो
गायक “राई इज किङ ” राजेश पायल राई को ‘जस्ले पनि’ बोल को गीत सार्बजनिक
उनले थुप्रै नेपाली चलचित्रका गीतहरूमा स्वर दिइसकेका छन ! उनी विश्वमै ५ घण्टामा ९ गीत रेकर्ड गर्ने उनी नै पहिला गायकका रुपामा उनलाई चिनिन्छ । गायक “राई इज किङ ” राजेश पायल राई को ‘जस्ले पनि’ बोल को गीत सार्बजनिक भएको छ ।अहिलेका लोकप्रिय गायक/संगीतकार महेन्द्र राई को संगीत र संगीत सम्योजन फनिन्द्र राईको रहेको […]
बर्षाले कस्का लागि जोवन साचे (भिडियो)
गायिका तारा लावती को ‘यो जोवन’ बोल को गीत सार्बजनिक भएको छ ।अहिलेका लोकप्रिय चर्चित संगीतकार अर्जुन पोखरेलको संगीत र संगीत सम्योजन रहेको र सुमन बैरागिको शब्द रहेको गीत द डिभाइन म्युजिकको युट्युब च्यानलबाट सार्बजनिक गरिएको छ ।पछिल्लो समय कि हट नायिका बर्षा सिवाकोटी र नायक यस राजले रोमान्स गरेको उक्त गीतमा ज्ञानेन्द्र शर्माले छायान्कन […]
‘ नै नै नभन ’ ले बजारमा कस्तो छाप छोड्ला त ? (भिडियो)
गायक बुद्ध पुटुवलले आफ्नो नयाँ गीत ल्याएका छन् । शुक्रबार आसर २२ गते “ नै नै नभन ” बोलको गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । दिपु कृष्ण डंगोल निर्देशित भिडियोमा मोडल अन्जाना दाहाल , रोजिना अधिकारी, प्रकाश कुँवर , समीर महर्जन गरिएको छ । जय राज थपलिया को छायाँकन रहेको भिडियोलाई दिपु कृष्ण डंगोलले सम्पादन गरेका छन् […]
“बाबु कान्छा” टाईटल गीतको भिडियो सार्वजनिक (भिडियो)
सोभित बस्नेतको निर्माण, लेखन र निर्देशन रहेको चलचित्र “बाबु कान्छा”को रमाइलो दृश्यहरुलाई समाबेशगरि तयार पारेको टाईटल गीतको भिडियो रिलिज गरिएको छ । ।उक्त गीतमा लेजेंड संगीतकार शम्भुजीत बास्कोटाले आवाज दिएका छन् र टंक बुढाथोकीको संगीत रहेको छ । माया प्रेमका कुरा सम्झने बिर्षने रमाइलो भिडियो बनेको छ । चलचित्रमा सलोन बस्नेत,करिष्मा श्रेष्ठ, नीर शाह, सरोज […]
विकास र आश्मा ‘कुशुम तिम्रो पछौरी’ गीत सार्वजनिक (भिडीयो)
प्रलाप राईको स्वर रहेको गीत ‘कुशुम तिम्रो पछौरी’ सार्वजनिक गरिएको छ । टिका दाहालको संगीत र रमेश दाहालको शब्द रहेको म्युजीक भिडीयोलाई सार्वजनिक गरिएको हो । गीतलाई पोखराका खिचिएको हो । बिकास लामिछाने र आश्मा गिरी फिचर भएको म्युजीक भिडीयोलाई प्रकास धितालले निर्देशन गरेका हुन् । बुढासुब्बा म्युजीकले बजार ब्यबस्थापन गरेको भिडीयोमा एक रोमान्टिक प्रेम […]
येशु थापा रचित गीत “मिठो मिठो प्रित बस्यो” बोलको गीतको म्यूजिक भिडियोको छायांकन सम्पन्न
चर्चित गायक राजेश पायल राई तथा गायिका जुनु गौतमको सुमुधुर आवाजमा रहेको “मिठो मिठो प्रित बस्यो” बोलको गीतको म्यूजिक भिडियोको छायांकन सम्पन्न भएको छ । येशु थापा (यशोदा थापा)को उत्कृष्ट रचनामा ,तयार भएको गीतलाई एमोस तामाङ्गले ऐरेन्ज गर्नुभएको छ भने अनिष श्रेष्ठले संगीत दिनुभएको छ । नृत्य निर्देशक संघ नेपाल को निर्माण तथा संघका उपाध्यक्ष […]
राजेशपायल राईको ‘धुवाँ’ सार्वजनिक
विश्वमै ५ घण्टामा ९ गीत रेकर्ड गरेर चर्चित बनेका गायक राजेशपायल राईको ‘उडी हराउने धुवाँ’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतकार ममता राईको शब्द रहेको गीतको संगीत तथा एरेञ्ज दिप घतानीको रहेको छ । गीत अमेरिकामा रेकर्ड गरेको हो त्यसै कारण भारत भन्दा टाढा समेत गित रेकर्ड गर्न पाएको मा आफुलाई भाग्यमानी सम्झिने […]
आकाश संग रोमान्स गर्दै आष्मा (भिडियो)
अभिनेता आकाश श्रेष्ठ पछिल्लो समय एक पछि अर्को चलचित्रमा व्यस्त रहेका छन् । उनि अभिनित ३ चलचित्र लगातार रिलिजको तयारीमा रहेका छन् । यहि बीचमा उनि अभिनित नयाँ चलचित्र ‘ड्रिम गर्ल’ को गीत सार्वजनिक भएको छ । अन्जु पन्त र सुरेश लामाको आवाजमा रहेको ‘तिम्रो मायामा’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । गीतमा अम्बिका शर्माको […]
गायक कमल के क्षेत्रीले नयाँ गीत सार्वजनिक
गायक कमल के क्षेत्रीले आफ्नो नयाँ गीत ल्याएका छन् । बिहिबार, जेठ १७ गते आफ्नो जन्मदिनको अवसर पार्दै कमलले कहाँ पाइन्छ र बोलको गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । विभोर पोखरेल निर्देशित भिडियोमा मोडल अकेशा विष्ट र कमल आफैं प्रस्तुत छन् । भिडियोका छायाँकन कलकत्ताको वेष्ट बंगालमा गरिएको छ । अनिल के मानन्धरको छायाँकन रहेको […]
फिल्म ‘बेबी आइ लभ यू’को दोश्रो गीत सार्वजनिक
जेठ १८ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको फिल्म ‘बेबी आइ लभ यू’को दोश्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । लभ स्टोरी जनरामा बनेको यस फिल्मको ‘सायद तेरो मेरो’ मेल स्याड भर्सन बोलको गीत केही साता अगाडि सार्वजनिक गरिएको थियो । यतिबेला पुन फिमेल स्याड भर्सनमा ‘सायद तेरो मेरो’ बोलको लिरिकल गीतलाई रिलिज गरिएको छ । […]
‘तिम्ले बाटो फेर्‍यौ अरे’ लाई करोडमा प्रबेश , राजेश पायल र मेलिनाले काटे केक
गीतकार दर्पण राई पहिलो गीतलेनै चर्चा कमाउन सफल, भाग्यमानी सेलीव्रेटीमा पर्छन् । ‘तिम्ले बाटो फेर्‍यौ अरे’, तिमिलाई मनपराउनु, बेबी आईलभ-यू लगायत चर्चित गीत दर्पण स्वयंमले लेखेर आफै संगीत भरेका छन् ।‘तिम्ले बाटो फेर्‍यौ अरे’लाई युटुवमा करोडौ बढी दर्शकको माया मिलेको छ । टंक बुढाथोकीले संगीत भरेको यस गीतलाई दर्पण स्वयंमले लेखेका हुन् ।यस […]
संचारकर्मि सूर्य चन्द निर्देशित “बुट्टे चोली” म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक
मिठो स्वरका धनि गायक सन्जिब बस्नेतको नया गित “ठोक्किएछ यो मेरो मन बुट्टे चोलीमा,जादु रैछ, जादु रैछ ज्यानै लुट्ने तिम्रो बोलीमा” को म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ l छोटो समयमा धेरै चर्चा बटुल्दै गरेका तथा विभिन्न मेला महोत्सबमा ब्यस्त बन्दै गएका नब गायक सन्जिब बस्नेतको सेलो बिटमा रहेको गित “बुट्टे चोलीमा” लाखौ संगीत प्रेमीहरुको जिब्रोमा […]
शान्ता तामाङ्ग अभिनित“फूल फुल्छ र झरेको छ” गीतको म्यूजिक भिडियोको छायांकन सम्पन्न
नायिका तथा समाजसेवी शान्ता तामाङ्ग अभिनित चर्चित गायिका मेलिना राई स्वरवद्ध “फूल फुल्छ र झरेको छ” बोलको निकै मर्मस्पर्शी गीतको म्यूजिक भिडियोको छायांकन सम्पन्न भएको छ । समाजसेवी तिलबहादुर कार्कीले संचालन गर्नुभएको संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्र तथा सो आसपास लगायत गोकर्णको रमणीय स्थानहरुमा छायांकन गरिएको उक्त गीतलाई शिल्पा बस्नेत क्षेत्रीको रचना गर्नु भएको हो […]
चर्चित मोडल नितु अभिनित मेलिनाको “आधी रातमा” सार्वजनिक (भिडियोसहित)
गायिका मेलिना राईले गाएको ‘आधी रातमा’ बोलको आधुनिक गीतको भिडियो सार्बजनिक भएको छ । सशी लामिछानेको शब्द र नेत्र बन्धन केसीको सङ्गीत रहेको गितलाई राजु केसीले निर्देशन गरेका छन । गीतको भिडियोको केहि अंश अष्ट्रेलियामा छायांकन गरिएको छ भने केहि भाग नेपाल र भारतको नैनि तालमा छायांकन गरिएको छ । अष्ट्रेलियामा सुरेन श्रेष्ठले भिडियोको छायांकन […]
नयन निर्देशित तथा अभिनित “कुन गित गाउँ”को भिडियो सार्वजनिक
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रकी पछिल्लो समय चर्चामा रहेकी गायिका सरु गौतमले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा ‘कुन गित गाउँ’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन् । तारा पराजुलीको शब्द तथा भीम बीसीको संगीत रहेको उक्त गीतमा गायिका सरु गौतमको सुमधुर आवाज रहेको छ । गीतको भिडियोमा चर्चित नायिका संचिता लुइटेल तथा चर्चित मोडल नयन डिसीको अभिनय देख्न सकिन्छ […]
पहिलो भिडियोबाटै मोडलिङ्ग क्षेत्रको चर्चामा मोडल सुवाष
झट् हेर्दा दक्षिण भारतिय नायक झै देखिने मोडल सुवास सुवेदी नेपाली मोडलिङ्ग क्षेत्रमा जम्ने तयारीमा छन् । केहि नेपाली चलचित्र तथा नाटकमा अभिनय गरेर छोटो समयमा नै कलाकारितामा सम्भावना बोकेर आएका मोडल सुवास सानै उमेर देखि मोडलिङ, कला, अभिनयमा रुचि राख्ने सुवास चर्चित गायिका मेलिना राई तथा गायक सोनाम तामाङ्गको आवाजमा रहेको सुमुधर गीतको म्यूजिक […]
“चुडी लग्यौ” बोलको म्यूजिक भिडियो सफलता पछि प्रदिपको व्यस्तता बढ्दो (भिडियो सहित)
नृत्य निर्देशक संघ नेपालको निर्माण तथा संघकै उपाध्यक्ष एवं चर्चित नृत्य निर्देशक प्रदिप श्रेष्ठ निर्देशित तथा गीतकार यशु थापाको ‘चुँडी लगेउ मुटु’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । राजसागरको स्वर तथा संगीत रहेको उक्त गीतको ऐरन्ज रिकेश गुरुङ्गको रहेको छ । बेल्जियम एनआरएनका पूर्व उपाध्यक्ष तथा सल्लाहकार एवं क्षेत्री समाजका महासचिव यशु थापाको शव्द रहेको […]
‘द कार्टुन्ज क्रु’ को ‘रेली माइ’ एक दिनमा युट्युब ट्रेन्डिङको पहिलो नम्बरमा
‘द कार्टुन्ज क्रु’ र चर्चित गायक तथा संगीतकार टंक बुढाथोकीको नया गीतको भिडियोले युट्युबमा उधम नै मचाएको छ । यो बर्ष मात्रै चलचित्र ’शत्रु गते’ मा समावेश गीत ’रुपै मोहनी’ गीत र आसुको अर्थ जस्ता सफल गीत दिएका छन् ।सार्वजनिक गीतको भिडियोमा कार्टुन्ज क्रुको एकदमै फरक र दमदार डान्स देख्न सकिन्छ ।सरोज अधिकरीको निर्देशनमा बनेको […]
‘मात नलाग्ने ’ शिव परियारको भिडियो सार्वजनिक
चर्चित गायक शिव परियारले आफ्ना स्रोता सामु नया गीत लिएर आएको छ । नेपाली सांगीतिक आकाशमा कयौं हिट गीत दिएका परियारले ‘मात नलाग्ने’’बोलको गीतका भिडियो आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।यहि बर्ष मात्रै शिवको ‘आँशुको अर्थ’र “हल्ला हल्ला मै माया” जसत हिट बजारमा आइसकेका छन् । मेरो अरु गीत जस्तै ‘मात नलाग्ने रक्सी […]
सुजनको नजरमा एलिसा परे परे पछि (भिडियो )
गायक सुजन तिगेला लिम्बु मोडल एलिसा राईको रुपमा मख्खै परेको भिडियो सार्वजानिक भएको छ । जुन भिडियोमा सुजन र एलिसाको सुहाउँदो जोडिको कम्बिनेशन देख्न सकिने छ । बिभिन्न किसिमका श्रृगांरिक बस्तुहरु लगाउदा सोल्टिीनी झनै सुन्दरी देखिने खालको भाव बोकेको यो गितमा सुजन तिगेला लिम्बुकै स्वर रहेको छ । उक्त गितमा शब्द तथा संगित पनि सुजनकै […]
धु्रब बिश्वको “काग दाजै “को गितको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक
नेपाली सांगीतिक बजारमा सुमधुर स्वरका धनि लोकप्रिय गायक धुर्ब बिस्को तथा गायिका सरु गौतमको “काग दाज्यै काग दाज्यै” सार्बजनिक भएको छ ।
रंजित द्वारा अभिनित ” पल पलको चाहना तिमि “ को म्युजिक भिडियो सार्बजनिक
मोडल रंजित पौडेल द्वारा अभिनित भिडियो ” पल पलको चाहना तिमि “ म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु किन झस्के बोके दाह्रीको यो गीतले ? (भिडियो सहित)
समाजमा घटेका यथार्थ घटनाहरुलाई गित मार्फत व्यंग्यात्मक तवरले कमेडी रुपमा गीतहरु प्रस्तुत गर्न खप्पीस गायक बोके दाह्री श्रीकृष्ण लुईटेलको को नयां गितको म्युजिक भिडियो सुनको सिक्री लोकप्रिय हुदै गएको छ ।
नविन र एन्जिलाको ‘दिलको भित्तै’ सार्वजनिक,कार्टुन्ज क्रु को आकर्षक डान्स
नेपालको चर्चित डान्स समूह “द कार्टुन्ज क्रु” को नयाँ भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘दिलको भित्तै’मा बोलको यो गितमा नविन रावल,अल्मोडा राना उप्रेती र एन्जिला रेग्मीको स्वर छ ।
“माया यो कस्तो” को भिडियो सार्वजनिक
गायक तथा संगितकार विकास श्रेष्ठको शब्द अनि स्वयं विकास र गायक तथा मोडल रवि सुवेदीको स्वर रहेको माया यो कस्तो बोलको गीत युट्युब बाट सार्वजनिक भएको छ । रशलाईट मिडियाको निर्देशनमा रहेको भिडियोको गीतलाई दिपेश सिंहले एरेन्ज गरेका छन । म्युजिक भिडियोमा नायिका जान्वी बोहरा, गायक तथा मोडल रवि सुवेदी तथा विकास श्रेष्ठको अभिनय रहेको […]
नृत्य निर्देशक संघको आयोजनामा राष्ट्रिय नृत्य महोत्सव हुदै
नृत्य निर्देशक संघ नेपालको प्रथम वार्षिकोत्सव तथा स्थापना दिवसको अवसरलाई सभ्य तथा भव्य रुपमा मनाउन राष्ट्रिय नृत्य महोत्सव २०७४ को आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा नेपालका पूर्व मेचि देखी पश्चिम महाकाली सम्मका विभिन्न जनजाती समुदाय, भाषाभाषीहरुको नेपाली कला र संस्कृति साथै विभिन्न लोक गीत, लोक भाका,लोक संगीत, आर्कषक भेषभुषा सहितको झांकी र नृत्यहरुको प्रस्तुती रहने […]
२४ गते गायक सुरेन्द्रको एकल सांझ
गायक तथा सङ्गीतकार सुरेन्द्र श्रेष्ठले एकल साँझ गर्ने भएका छन् । उनले असार २४ गते ठमेलस्थित थर्ड आई थियटरमा आफ्ना विभिन्न प्रस्तुतीहरु लिएर स्रोतामाझ प्रत्यक्ष आउने भएका छन्। उक्त कार्यक्रममा उनले आफ्ना चर्चित गीतहरु प्रस्ततु गर्नेछन् । दुई दशक भन्दा लामो समयदेखी सङ्गीत क्षेत्रमा क्रियाशिल श्रेष्ठका स्वरमा तीन दर्जन भन्दा गीतहरु दर्शक–स्रोता माझ आएका छन् […]
रमिता भण्डारी र जोहेब मानन्धरको ‘के यो माया हो’
नेपाली गीत संगीतका पारखी हरुलाई चर्चित मोडेल तथा गायिका रमिता भण्डारी र गायक जोहेब मानन्धरको ‘के यो माया हो’ शीर्षाकृत गीतको म्युजिक भिडिओ सार्वजनिक भएको छ । गायक मानन्धरकै शब्द र संगीत रहेको सो गीतको म्युजिक भिडियो रोजेश श्रेष्ठले निर्दैशन तथा छायांकन गरेका हुन् । ‘के यो माया हो’ गीतको संगीत संयोजक सन्दीप कार्की रहेका छन् […]
आठ महिना देशभरि डुलेर तयार पारिएको म्युजिक भिडियो
सिजी इन्टरटेनमेन्टले बजारमा ल्याएको,‘निधारमा नाम्लो’ र ‘परिवर्तन’ शीर्षकमा बनेको म्युजिक भिडियो सनिबार राति अन्नपुर्ण होटलमा गरिएको कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको छ ।साथै युट्युबमार्फत पनि भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ ।
चर्चित र्यापर ‘यम बुद्ध ’ ले गरे आत्महत्या
चर्चित र्यापर यम बुद्ध (अनिल अधिकारि)ले लन्डनमा आत्महत्या गरेका छन ।लण्डनमा रहेका बीबीसीका सम्वाददाता भगिरथ योगीका अनुसार युवा गायक अधिकारीले लण्डनस्थित आफ्नै निवासमा आत्महत्या गरेको
प्रेमकोको बिन्ति बिसाउदै गायक प्रताप दास(भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौँ : गायक प्रताप दासको आवाजमा रहेको “प्रेमको बिन्ति” बोलको म्युजिक भिडियो सार्बजानिक भएको छ l युवा निर्देशक सत्य राज चौलागाईले निर्देशन गरेको उक्त म्युजिक भिडियो उत्कृष्ट बनेको छ भने मोडेल मेघा केसी र अनुप ढकालको कुशल अभिनय देख्न सकिनेछ l उक्त प्रेमको बिन्ति बोलको गीतमा रमेश बराइली शब्द, सरोज पोखरेलको संगीत रहेको छ भने […]
कलाकार राजेन्द्रले किन प्रेमिकाको हत्या गरे (हेर्नुस भिडियो)
काठमाडौं/ बहुप्रतिभाका धनी युवा मोडल राजेन्द्र लुईटेलले आफ्नै प्रेमिकाको हत्या गरी पागल भएका छन् । यो वास्तविकता नभई चर्चित गायक स्वरुपराज आचार्यको स्वरमा रहेको मृत्युपछिको भिडियो दृश्य हो ।
प्रमोद खरेलको गीतमा रक्षा लत्ठिएपछी राज र अनिललाई के भयो ? भिडियो सहित
भद्रगोलकी कलाकार रक्षा श्रेष्ठ पोखराको एक गजलबारमा मदिरामा लट्ठ भएको अवस्थामा भेटिएकी छन् । मोडल अनिल श्रेष्ठको गीत सुनेर उनी अनिलकै कल्पनामा डुबेकी छन् । चर्चित गायक प्रमोद खरेलको आवाजमा रहेको हरेक रात बोलको आधुनिक गीतको म्युजिक भिडियोको दृश्य हो यो । म्युजिक भिडियोमा अनिल र रक्षाको साथमा राजेन्द्र लुइँटेलको अभिनय रहेको छ । शेखर […]
गायक प्रदिप लामाको गीतमा रक्षा श्रेष्ठ डुबे पछी ..
भद्रगोलमा अभिनय गरेर चर्चामा आएकी रक्षा श्रेष्ठ म्युजिक भिडियोमा ब्यस्त हुन थालेकी छिन् । प्रमोद खरेलको आवाजमा रहेको हर रात गीतको चर्चा सेलाउन नपाउदै उनी गायक प्रदिप लामाको आवाज रहेको डुब डुब गीतको भिडियोमा उनी अर्का चर्चित मोडेल दिपक लामासँग देखिएकी हुन । गीतमा उत्कृष्ट शब्द र संगीत संयोजन गायक प्रदिप आँफैले गरेका छन । […]
बुद्ध, मि एण्ड नेपालले भूकम्पबाट ग्रस्त जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा बुद्धको १०० फुट अग्लो मुर्ति तथा शिक्षालय स्थापनार्थ साउन १४ गते राजधानीको प्रज्ञा भवनमा “बुद्ध, म र नेपाल मनोरञ्जन साँझ २०७३“ नामक एक भब्य मनोरन्जनात्मक साँगितिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रमको सुरुवात चर्चित गायिका कोमल ओलीले आफ्ना चर्चित गीतहरु गाएर गरिन । उनको पछील्लो समयमा चर्चित […]
राम बहादुर बाँडेका तीन एल्बम एकसाथ रिलीज
काठमाण्डौ। गायक, संगीतकार तथा रचनाकार राम बहादुर बाडेका तीन म्यूजिक एल्बम एकसाथ रिलीज गरिएको छ । आइतवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नयाँ शक्ति नेपालका नेता देवेन्द्र पौडेलको प्रमूख आतिथ्यतामा एल्बम सार्वजनिक गरिएको हो । नेपाली आधुनिक गीति संग्रह ‘नसोचेको भाग -२’, भजन माला १ (नेपाल भाषा) र भजन माला १ (नेपाली भाषा) गरि तीन एल्बम […]
झुक्याएरै नायिका श्रीयाले नजरको बल्छीमा कसलाई हानिन् ? [हेर्नुस भिडियो सहित]
श्रावन ४, काठमाडौँ । नायिका तथा मोडल श्रीया कार्कीको नयाँ म्युजिक भिडियो ‘झुक्याएरै किन होला’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। मोफसलमा रहेर पनि निरन्तर नेपाली गीत संगीतमा लागी रहेका गायक नितिन गजुरेलको सुमधुर स्वरमा सजिएको उक्त गीतमा नायिका श्रीयाको साथमा नवमोडल प्रभात र रोजाले पनि अभिनयमा साथ दिएका छन्। तिकोणात्मक प्रेम कथामा आधारित म्युजिक […]
मेरो मुटुको भिडियो तथा गीतलाई सबैले राम्रो भनेपछी ….
काठमाडौं । यतीखेर गायक तुलधार दर्नाल दंग छन । उनको नयाँ गीत भिडियो बन्न्नु अगाडि नै सबैले मन पराएका थिए , अहिले म्युजिक भिडियो निर्माण पछी सबैले भिडियो तथा गीतलाई उत्कृष्ट भनेपछी उनी यती बेला दंग छन । तुलाधार दर्नाल संभाबना बोकेका गायक हुन । झन्डै एक दसक अघिदेखैनै नेपाली सुगम संगीतमा सकृय तुलाधारले आफ्नो […]
पलले पट्टयाए निशालाई
गायक किरण इजम लिम्बुले आफ्नो पछिल्लो गीत मस्की मस्कीमाथि बनेको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्। लिम्बुले आफ्नो दोस्रो एल्बम ओझेलमा रहेको यो गीतको भिडियोमा चर्चित मोडल पल शाह र निशा लिम्बुले अभिनय गरेका छन्।
बेलायत पुगेर यूवती नपाएको गुनासो गरे राजेशपायलले
केही बर्षदेखि गायक राजेश पायल राइले मन मिल्ने केटी पाउन नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन् । स्टेज कार्यक्रम होस् या मिडियासँगको कुराकानी नै किन नहोस्, युवतीको प्रसंग आउने बित्तिकै भनिहाल्छन् ‘मैले त मन मिल्ने केटी नै पाईन ।’
सुन्दासुन्दै आँसु झार्ने गायक रामकृष्ण ढकालको नयाँ गीत (भिडियो सहित)
नेपाली सुुगम गायनमा गायक रामकृष्ण ढकालको बेग्लै पहिचान छ । उनका गीतसंगीत सुनेर हुर्कने र उनकै बाटो पछ्याएर आज गायनमा संघर्षरत धेरै संगीतकर्मी छन् ।
धेरैका प्रिय गायक रामकृष्ण ढकालको अर्को कर्णप्रिय गीत सार्वजनिक भएको छ ।
दुनीया वेग्लै छ मा नाच्दा ५० हजार पुरस्कार
अष्ट्रेलियामा बस्दै आएका दंगाली गायक समीर आचार्य र अमेरिकामा बस्दै आएकी निक्की कार्की दुनीया वेग्लै छ वोलको गीत लीएर श्रोता सामु आएका छन । आषिश अविरलको संगीत र आनन्द अधिकारीको शब्द रहेको गीतको म्यूजिक भिडियो प्रशन्न पौडेलले अमेरीकावाटै स्काइपमा निर्देशन गरेका हुन । पुष्प र तनुजाको अभिनय रहेको यस गीतलाई दर्शक श्रोता सामुमा पुरयाउनको लागी […]
बिन्दबासीनीले आफूलाई सच्यायो
समाचार प्रकाशन भएको झण्डै २४ घन्टा पछि बिन्दवासीनी म्यूजिकले सम्बन्धित समाचारमा उठाएको बिषयलाई सच्याएको छ ।
बिन्दबासिनी म्युजिक प्रा.ली द्धारा एक सर्जकको नैतिक अधिकार हनन
बिन्दबासीनी म्यूजिक प्रालीका सञ्चालक सुवास रेग्मीले एक जना स्रष्टाको नैतिक अधिकार हनन गरेको पाइएको छ ।
गीतकार लोकराज अधिकारीको नयाँ गीत सार्वजनिक
सञ्चारकर्मी एबं गीतकार लोकराज अधिकारीको दोश्रो एकल गीति संग्रह ‘दरार’ मा समेटिएको गीत टाढा भाकै राम्रो, काठमाण्डौमा सार्बजनिक गरिएको छ ।
मायामा धोका दिए पछी के के हुन्छ ( भिडियो सहित )
नेपाली सांगीतिक आकासमा पूर्वी झापाबाट साङितिक नक्षत्रको रुपमा उदाएर सफल गायकको रुपमा स्थापित भईसकेका छन सिमान्त सन्तोष । झापा बालुबाडी ८ स्थायी घर भएका गायक सिमान्त सन्तोषको पहिलो गीत ‘मेरो दिल दुखायौ के पायौ’ बाट नै नेपाली सुगम संगीतका पारखीहरुले उनको स्वरलाई मन पराएका थिए । रमेश कडरीयाको शब्द र संगीतमा रहेको पहिलो गीत मेरो […]
दिपकले आँसु झार्दै भने,देशमै बसौ विदेश नपसौं (भिडियो )
कामले थकित हुँदै बेलुकी कोठामा फर्किए पछि दिपकका आँखा टिलविल टिलविल गर्छन् । काहाँ देशको माया, कहाँ आफ्नो परिवार अनि कहाँ त्यी खोला नाला, आखिर अर्काको देशमा गर्ने मेहनत देशमै गर्ने हो भने हामी यसरी अर्काको देशमा पसिना बगाउनु पर्दैनथ्यो ।
अमन अन्तराष्ट्रिय सुपरस्टार
नेपाली गायक अमन प्रधान अन्तराष्ट्रिय सुपरस्टार कन्टेस्ट प्रतियोगीतामा विजयी हुनुभएको छ ।
बरिष्ठ संगीतकार खड्गीको निधन
बरिष्ठ संगीतकार रत्नबहादुर खड्गीको निधन भएको छ ।
फोक्सोको क्यान्सरसँग लडिरहेका खड्गीको बिहिबार त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लुक्रस अस्पतालमा निधन भएको हो ।
आनी छोइङ्को नयाँ गीत (भिडियो)
आनी छोइङ् डोल्माको स्वरमा नयाँ गीतको भिडियो रिलिज भएको छ ।
मिराज र शितल अभिनित म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
मुटुको धड्कन आँखाको दृष्टि तिमी नै हौ मेरो जीवन जीउनुको अर्थ पनि तिमी नै हौ मेरो….गीतकार क्षितिजको शब्द रहेको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
गायिका रेखा शाह पक्राउ परेकी छन् ।
‘सिमसिमे पानीमा’ बोलको गीतले ख्याती बटुलेकी उनलाई ठगीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
सन्दिप शाहीलाई मायाँले के गरायो ! (भिडियो सहित)
सन्दिप शाहीलाई, पहिलो म्युजिक भिडियो तिम्रो मायाले यो के गरायोमा देख्न सकिने भएको छ ।
भर्खरै रेकर्डिङ सकेका गायक बादल प्रसाईं आफ्नो प्रेमिकाका लागि दैबसँग आफ्नो मनको दुखेसो पोख्दै हिड्नुभएको छ ।
आकांक्षालाई कसले रुवायो ? (हेर्नुस भिडियो सहित)
काठमाडौं/ चर्चित एंव प्रतिभाशाली गायिका आकांक्षा बस्याल अहिले चर्चामा छिन् । उनको सुमधुर स्वरमा ‘मलाई रुन देउ’ बोलको गीत श्रोत्ता माझ ल्याएकी छन् । उनको यो गीतलाई दर्शक एंव श्रोत्ताले आत्याधिक रुचाइएको छ । प्रेम र विछोडको भाव रहेको यो गीतको भिडियो युट्युवमा राखेको छोटो समयमा हजारौंले हेरीसकेका छन् । आकांक्षाको स्वर रहेको यस गीतमा […]
मौसमले सोल्टीनिलाई के भने (हेर्नुस भिडियो सहित)
काठमाडौं/चर्चित लोक गायक मौसम गुरुङले पहिलो चोटी सालैजो “सोल्टिनी नानी” गीत गाएका छन् । सोल्टीनी नानी बोलको गीतमा मौसम गुरुङ र मुना थापा मगरको स्वर रहेको छ भने शब्द कृष्ण आचार्य ‘रोशनी’ र लय राजु गुरुङको रहेको छ । यस गीतको भिडियोमा अभिनय उमेश गुरुङ र कोपीला गुरुङको छ । उमेश गुरुङको निर्देशन, रविन्द बरालको […]
भट्टराईलाई साझँ पर्नै नहुने रक्सी खानु पर्ने कस्तो बानी (भिडियो सहित)
काठमाडौं / गायक तथा संगीतकार रमेश राज भट्टराईको जब साझँ पर्छ बोलको गीत अहिले निकै चर्चामा रहेको छ । यस गतिमा भट्टराईको शब्द,संगीत र स्वर रहेको छ । यस अघि भटराईको बबाल भो पनि दर्शक श्रोतामा माझ लोकप्रिय भएको थियो । यहिले त्यहि लोकप्रिय गीतको भाग-२ बबाल -२ बजारमा ल्याएका छन् । यस गीतका म्युजिक […]
सुमन शेखर मानन्धरको उदास उदास गीत सार्वजनिक(भिडियो सहित)
काठमाडौं/सोह्र वर्षे तिम्रो…’, ‘चञ्चले नानी चुल्बुले बानी…’ ‘कान्छीको लजाउने बानी…’, जस्ता रोमान्टिक गीतका सर्जक हुन्, सुमन शेखर मानन्धर। एक दशक अगाडीसम्म यी गीत सबैको मुखमा झुण्डिएको थियो। गीत हिट भएपछि सुमनको हाईहाई हुने भइ नै हाल्यो। रसिला गायकका रुपमा ख्याती कमाएका सुमन केही समययता ओझेलमा छन्। आठ वर्ष अगाडी सार्वजनिक भएको ‘मेरो देश नेपाल…’ पछि […]
के गर्दैछन डिजे युवा
राजेन्द्र लुईटेल हालको गीत संगितको क्षेत्रलाई राम्रो र विश्वसामु चिनाउने उद्धेश्यले नेपाली सांगीतिक आकाश उदाएका व्यक्ति हुन डिजे युवा (युवराज भण्डारी) । बाल्यकालदेखिनै सांगितिक क्षेत्रमा रुची भएका डिजे युवाले जीवनको आदीकालबाटै धेरै ठूलो सघर्षको भुमरीलाई खेप्नु पर्यो । ढेडबर्षको उमेरमा मातृशोक र तीन बर्षको उमेरमा पितृशोकको पिडामा परेका डिजे युवाले एक किसिमको टुहुरोको महसुस त […]
राज र रक्षाको बोलचाल बन्द (हेर्नुस भिडियो)
काठमाडौं/ शैलेन्द्र प्रधान बावुको ऐरेन्ज तथा डा. बद्री पोख्रेलको रचनामा गायक सुगम पोख्रेलको संगित तथा गायनमा निकै नै कर्ण प्रिय र चर्चित गित मलाई नभेट है ……..गितको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गित यस अघि निकै नै चर्चामा रहेको थियो । उक्त गितको भिडियो हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ । संचारकर्मी राज लुईटेल तथा […]
गायक नबिन पौडेलको हरेक जातजाति छौं नानाथरी सार्वजनिक
कठमाडौं/ गायक नबिन पौडेलको गीति एल्बम ‘हरेक जातजाति छौं नानाथरी’ सार्वजनिक भएको छ ।
काठमाडौं – विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएको सिजन मिडियाले अबदेखि कार्यक्रम व्यवस्थापनको पनि काम सुरु गरेको छ । …